Sucrose waxay leedahay 65-70% waxsoosaarka sonkorta adduunka. Nidaamka wax soo saarku wuxuu u baahan yahay uumis badan iyo koronto, waxayna soo saartaa haraaga badan heerarka kala duwan ee wax soo saarka at isla waqtigaas.
Xaaladda Soo-saarka Sucrose ee Adduunka
Waxaa jira in ka badan boqol waddan oo adduunka ah oo soo saara sukrose. Brazil, India, Thailand iyo Australia ayaa ah kuwa ugu badan soo saarista iyo dhoofinta sonkorta adduunka. Soosaarka sonkorta ee ay soo saaraan wadamadan ayaa u dhiganta 46% waxsoosaarka guud iyo wadarta guud ee dhoofinta sonkorta waxay u dhigantaa ilaa 80% dhoofinta adduunka. Waxsoosaarka sonkorta reer Brazil iyo qiimeynta dhoofinta heerka koowaad ee adduunka, waxay u dhigantaa 22% waxsoosaarka guud ee sanadlaha ah ee sukrose iyo 60% wadarta dhoofinta adduunka.
Wax soosaarka Sonkorta / Sonkorta iyo Curinta
Nidaamka ka shaqeynta sonkorta, marka laga reebo waxyaabaha ugu muhiimsan sida sonkorta cad iyo sonkorta buniga ah, waxaa jira 3 badeecooyin waaweyn: bagasse sonkorta, dhoobada saxaafadda, iyo muraayadaha madow.
Bagasse waa haraaga dufanka ka soo baxa bakooradda sonkorta ka dib markii laga soo saaro casiirka usha. Bacasse sokorta si wanaagsan ayaa looga faa'iideysan karaa soo saarista bacriminta dabiiciga ah. Si kastaba ha noqotee, maaddaama bagasse uu ku dhow yahay cellulose saafi ah oo ay ku jirto ku dhowaad nafaqooyin ma aha bacrimin wax ku ool ah, ku darista nafaqooyinka kale aad bey muhiim u tahay, gaar ahaan maaddooyinka hodanka ku ah nitrogen, sida qalabka cagaaran, digada lo'da, digada doofaarka iwm. qudhmay.
Dhoobada saxaafadda, waa hadhaaga ugu weyn ee soo saarista sonkorta, waa hadhaaga lagu daaweeyo casiirka sonkorta sonkorta iyadoo la sifeynayo, taas oo ka dhigan 2% miisaanka sonkorta la shiiday. Waxaa sidoo kale loo yaqaan dhoobada saxafada filterka sonkorta, dhoobada saxarada saxarada, dhoobada keegga sokorta sonkorta, keegga filterka sonkorta, dhoobada shaandhada sonkorta.
Keegga shaandhada (dhoobada) ayaa sababa wasakheyn weyn, dhowr warshadood oo sonkor ah ayaa loo arkaa qashin, taasoo keeneysa dhibaatooyin maamul iyo qashin-saarid ugu dambeysa. Waxay wasakheysaa hawada iyo biyaha dhulka hoostiisa ku jira haddii dhoobada dhoobada si aan kala sooc lahayn loogu dhajiyo. Sidaa darteed, daaweynta dhoobada saxaafadda waa arrin deg deg ah oo loogu talagalay warshadaynta sonkorta iyo waaxyaha ilaalinta deegaanka.
Codsiga dhoobada saxaafadda
Xaqiiqdii, maadaama ay ku jiraan qaddar badan oo ah walxo dabiici ah iyo walxo macdan ah oo loogu baahan yahay nafaqada dhirta, keegga shaandhada ayaa horay loogu isticmaalay bacrimin dalal dhowr ah, oo ay ku jiraan Brazil, India, Australia, Cuba, Pakistan, Taiwan, South Africa, iyo Argentina. Waxaa loo adeegsaday beddel dhammaystiran ama qayb ahaan bacriminta macdanta ee beerista sonkorta, iyo beerista dalagyada kale.
Qiimaha Mashiinka Saxaafadda Mud sida Bacriminta Bacriminta
Qiyaasta soosaarka sonkorta iyo dhoobada miiraha (biyaha ku jira 65%) waa qiyaastii 10: 3, taasi waa in la yiraahdo 10 tan oo soo saar sokor ah waxay soo saari kartaa 1 tan oo dhoobada miiraha qalalan ah. Sannadkii 2015, wadarta wax soo saarka sonkorta adduunka waa 0.172 bilyan oo tan, iyadoo Brazil, Hindiya iyo Shiinaha ay matalayaan 75% wax soo saarka adduunka. Waxaa lagu qiyaasaa in qiyaastii 5.2 milyan oo tan oo dhoobo ah laga soo saaro Hindiya sanad kasta.
Kahor ogaanshaha sida bey'ad-saaxiibtinimo leh loogu maareeyo dhoobada saxaafadda dhoobada ama keegga saxaafadda, Aan aragno wax badan oo ku saabsan halabuurkeeda si markaas xal macquul ah loo helo dhowaan!
Waxyaabaha jirka lagu sameeyo iyo waxyaabaha kiimikada ka sameysan dhoobada Sugarcane Press:
Wadarta Adkaanta kacsan
BOD (5 maalmood oo ah 27 ° C)
Kaarboon Dabiiciga ah.
Arrin dabiici ah
Wax iyo Dufan
Markaad kor ka aragto, dhoobada saxaafadda waxaa ku jira tiro aad u tiro badan oo nafaqooyin dabiici ah iyo kuwa macdanta ah, marka lagu daro 20-25% kaarboonka dabiiciga ah. Dhoobada saxaafadda sidoo kale waxay hodan ku tahay macdanta potassium, sodium, iyo fosfooraska. Waa ilo hodan ah oo fosfooraska iyo walxaha dabiiciga ah waxayna leedahay qoyaan ballaaran, taas oo ka dhigaysa inay noqoto bacrimin nafaqo leh oo qiimo leh! Isticmaal caadi ah ayaa loogu talagalay bacriminta, labadaba qaabka aan la soo saarin iyo kan la farsameeyay. Nidaamyada loo isticmaalo in lagu hagaajiyo qiimaha bacriminta
waxaa ka mid ah nafaqeynta, daaweynta jeermisyada iyo ku darista waxyaabaha wasaqda ka soo baxa
◇Maaddooyinka sonkorta leh:
Molases waa badeecada laga soocay sonkorta 'C' inta lagu gudajiro cufnaanta sonkorta. Soo saarida molases halkii tan ee bakoorad ayaa ku jirta inta udhaxeysa 4 ilaa 4.5%. Waxaa loo diraa warshada iyada oo ah alaab qashin ah.
Si kastaba ha noqotee, moolasku waa il wanaagsan oo dhakhso leh oo loogu talagalay noocyada kala duwan ee microbes iyo nolosha carrada ee ku urursan compost ama ciidda. Molasesku wuxuu leeyahay kaarboon 27: 1 ah oo loo qoondeeyo nitrogen wuxuuna ka kooban yahay qiyaastii 21% kaarboon milmaan ah. Waxaa mararka qaarkood loo isticmaalaa dubista ama soo saarista ethanol, iyada oo ka kooban cunnada lo'da, iyo sida bacriminta "ku-saleysan mooska".
Boqolleyda nafaqooyinka ku jira Molases
Gulukooska & Fructose
Kaalshiyamka iyo Botaasiyam
Xeryaha aan sonkorta lahayn
Filter Press Mud & Molases Nidaamka Soo-saarista Bacriminta Bacriminta
Marka hore dhoobada saxafada (87.8%), walxaha kaarboonka (9.5%) sida budada cawska, budada cawska, burooyinka jeermiska, buunshaha qamadiga, buunshaha, balka iwm, molasses (0.5%), hal super phosphate (2.0%), dhoobo baaruud (0.2%), ayaa si fiican loo qasay oo la geeyay qiyaastii 20m oo dherer ah oo ka sarreeya heerka dhulka, 2.3-2.5m oo ballac ah iyo 5.6m oo dherer ah oo wareega wareega ah. (talooyin: ballaca dhererka dabaylaha waa inay ahaadaan mid waafaqsan xogta halbeegga ee leexinta compost ee aad isticmaaleyso)
Tuulmooyinkan waxaa la siiyay waqti la isku daro oo loo dhammaystiro habka dheefshiidka illaa 14-21 maalmood. Intii lagu gudajiray, isku darku waa la qasay, la rogay oo la waraabiyay seddexdii maalmoodba mar si loo ilaaliyo qoyaanka 50-60%. Jiheeyaha compost-ka ayaa loo isticmaalay wareejinta geedi socodka si loo ilaaliyo isku ekaanta iyo isku darka isku dhafka. (Tilmaamaha: compost windrow Turner waxay ka caawisaa isku darka wax soo saaraha bacriminta iyo rogista compost si dhakhso leh, isagoo noqda mid hufan oo lagama maarmaan u ah khadka soo saarista bacriminta dabiiciga ah)
Haddii qoyaanka uu aad u badan yahay, waqtiga halsano waa la kordhiyay. Qiyaasta biyaha ee dhoobada waxay sababi kartaa halsano aan dhammeystirnayn. Sidee loo xukumaa in compost-ka uu bislaaday? Bacriminta qaangaarka ah waxaa lagu gartaa qaab dabacsan, midab cawlan (oo loo rogay cajaladda) iyo ur la'aan. Waxaa jira heerkul isdaba-joog ah oo u dhexeeya bacriminta iyo hareeraheeda. Qoyaanka bacriminta ayaa ka yar 20%.
Qalabka khamiirka ayaa markaa loo diraa New granulator bacriminta dabiiciga ah sameynta granules.
◇Qalajinta / Qaboojinta
Badeecadaha ayaa loo diri doonaa Mashiinka qalajinta durbaanka Rotary, halkan molasses (0.5% wadarta alaabta ceeriin) iyo biyaha waa in lagu buufiyaa kahor intaan la gelin qalajiyaha. Qalajiyaha durbaanka wareega, qaadashada tikniyoolajiyada jireed si loo qalajiyo granules, ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo granules heerkulkeedu yahay 240-250 ℃ iyo in la yareeyo qoyaanka ilaa 10%.
Ka dib marka la isku daro compost, waxaa loo diraa mashiinka shaashadda durbaanka Rotary. Qiyaasta celceliska bacriminta-bayoolaji waa inay ahaataa dhexroor 5mm si ay ugu fududaato beeraleyda iyo granule tayo wanaagsan leh. Weynaanta iyo hoos u dhigida granules mar labaad ayaa dib loogu warshadeeyay qeybta granulation.
Waxsoosaarka cabbirka loo baahan yahay ayaa loo diraa mashiinka baakadaha oo otomaatig ah, Halka ay ku jiraan boorsooyinka iyada oo loo marayo buuxinta otomaatiga. Ka dibna ugu dambeyntii badeecada waxaa loo diraa aag kala duwan oo iib ah.
Waxyaabaha lagu bacrimiyo Sonkorta Mud & Maddoole
1. Iska caabbinta cudur sare iyo haramaha yar:
Inta lagu jiro daaweynta dhoobada shaandhada sonkorta, noolaha si dhakhso leh ayuu u tarmaa una soo saaraa xaddi badan oo antibiyootiko ah, hormoonno iyo dheef-shiid kiimikaad kale oo gaar ah. Dalbashada bacriminta ciidda, waxay si wax ku ool ah u horjoogsan kartaa faafidda cudurrada iyo koritaanka haramaha, hagaajinta cayayaanka iyo caabbinta cudurrada. Dhoobada miiraha qoyan ee aan lahayn wax daaweyn ah way fududahay in loo gudbiyo bakteeriyada, abuurka haramaha iyo ukunta dalagyada waxayna saameyn ku yeelan kartaa koritaankooda).
2. Waxtarka bacriminta sare:
Maaddaama muddada halsano ay tahay 7-15 maalmood oo keliya, waxay haysaa nafaqooyinka dhoobada miiraha sida ugu macquulsan. Sababtoo ah kala daadsanaanta noolaha, waxay bedeshaa maaddooyinka ay adag tahay in la nuugo nafaqooyinka waxtarka leh. Sifeeyaha sonkorta bacriminta noolaha ayaa si dhakhso leh ugu ciyaari kara waxtarka bacriminta waxayna dib u buuxin kartaa nafaqooyinka looga baahan yahay koritaanka dalagyada. Sidaa darteed, waxtarka bacriminta wuxuu hayaa waqti dheer.
3. Dhaqamaynta bacriminta ciidda iyo hagaajinta ciidda:
Isticmaalidda hal bacrimin kiimiko ah muddo-dheer, walxaha dabiiciga ah ee ciidda ayaa si tartiib tartiib ah loo cunaa, taas oo keenta tirada yareynta microbial-ka carrada ee waxtarka leh. Sidan oo kale, maadada enzyme-ka ayaa yaraynaysa isla markaana kolloidal-ka waxyeelloobayaa, taas oo keenaysa isugeynta ciidda, aashitada iyo cusbada. Sifee bacriminta dabiiciga ah ee dhoobada ayaa mideyn kara ciidda, dhoobada dabacsan, xakameynaya cudurada, dib u soo celinta jawiga deegaanka ee deegaanka, kor u qaadista carrada iyo hagaajinta awooda lagu haayo biyaha iyo nafaqooyinka.
4. Hagaajinta wax-soo-saarka dalagga iyo tayada:
Ka dib markii la codsado bacriminta dabiiciga ah, dalagyada waxay leeyihiin nidaam xididaysan iyo noocyo caleemo xoog leh, oo kobciya biqilka dalagyada, koritaanka, ubax, miro dhalinta iyo bislaanshaha. Waxay si muuqata u hagaajineysaa muuqaalka iyo midabka wax soo saarka beeraha, waxay kordhisaa xaddiga bakooradda sonkorta iyo miraha macaan. Sifee bacriminta bio-organic bacriminta waxay u isticmaashaa sidii faashadda guud iyo tan sare. Xilliga sii kordhaya, mari qadar yar oo ah bacriminta aan dabiici ahayn. Waxay dabooli kartaa baahiyaha koritaanka dalagga waxayna gaari kartaa ujeedka loo maareeyo loona isticmaalo dhulka.
5. Codsi ballaadhan oo ku saabsan beeraha
Adoo adeegsanaya bacriminta aasaasiga ah iyo dharka kor loogu qaadayo bakooradda sonkorta, mooska, geedka miraha, qaraha, khudradda, geedka shaaha, ubaxyada, baradhada, tubaakada, calafka, iwm.